Sarkaal ka soo goostay Shabaab oo banaanka keenay xogo badan oo Shabaab u qarsoonaa. – Xeernews24
Sarkaal ka soo goostay Shabaab oo banaanka keenay xogo badan oo Shabaab u qarsoonaa.
25. Januar 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Nasteh ayaa si qarsoodi ah uga dhaxshaqeeynaayay Maleeshiyada Al-Shabab ta, Nasteh waxaa uuna xogaha u soo gudbin jiray horjoogayaasha Alshabaab ugu sarsareeyso, waxuuna u qaabilsanaa xaqiijinta iyo qorsheeynta qaraxyada iyo dilalaka qorsheeysan.
Lakiin dabayaaqadi sanadki la soo dhaafay ayaaa isagoo ka faa’idaysanaay fursadaha ay siisay Dowladda Soomaaliya 26jrka lagu magacaabao Nasteh isku soo dhiibay Ciidanka Xooga Dalka,kana soo laabtay kamid ahaanshihii maleeshiyaadkaasi Alshabaab.
Mar uu lahadlayay Wakaaladad Wararka Reuters ayuu ka sheekeeyey dhibaatooyinka Alshabaab ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed,wuxuuna sheegay in ALshabaab ay dhib weyn ku hayaan bulshada Soomaaliyeed oo ay kula dhaqaaqaan Dil dhac iyo barakicin.
“Waxeey dilaayeen culimaaudiinka, “waxaa uu u sheegay wakaalada wararka ee Reuters xili ay wareeysi vidiyoow ah la yeelatay,waxaa uu sheegay in Alshabaab ay dileen 3 culimo ah dhawaan “waxeey dilaayeen iyago oo aan wax wadatashi ah aan sameeyn, micnaheedu wuxuu ah iyaga ayaa iskaleh go’aanka ugu sareeyo”. Ayuu hadalkiisa intaasi ku daray.
Dadka soogoostay ayaa u sheegay Reuters, inay qaar ku qasbanaadaan in ay soo maraan wado wareeg ah oo duurka dhexdiisa ah. “Ma aanan u sheegin xaaskeyga … waxba ma aanan cunin, wax yar ayaar ayaan seexan jiray, waxaan ka soo tagay dhamaan buugaagteeydi, waxaan tuuray dhammaan SIM kaaradeeyda ay igu garanayeen,” ayuu yiri sarkaal sare oo dhanka waxbarshada ah oo heer degmo ah, isaga oo sharxaya soogoosashadiisa oo hal isbuuc ku qaadatay in uu ku soogosto.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa sii kordhayay tirade Horjoogayaasha iyo Maleeshiyada ALshabaab oo isku soo dhiibaya Dowladda,iyagoo ka faa’idaysanaya baaqii Madaxweynaah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ahaa in cafis loo fidinayo dadka ka soo goosta Alshabaab,wixii xiligasi ka dambeeyey waxaa jiray tiro badan o kamid ah maleeshiyadaasi oo isku soo dhiibay ciidamada Dowladda.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/01/SONNA-ALSHABAAB-180x135.jpg 135 180 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-01-25 18:22:102018-01-25 18:22:10Sarkaal ka soo goostay Shabaab oo banaanka keenay xogo badan oo Shabaab u qarsoonaa.
Xaaladda Abaarta ee Gobolka Salal Ciidamo ka tirsan dawladda Fedaraalka Soomaalia ayaa lagu Sagootiyey Xaflad